Mhete Mhete dzakakurudzirwa neMuti weAlmond muBlossom rakapendwa naVan Gogh. Iko kudyiwa kwematavi kunoitwazve nehurefu Cartier-mhando maketeni ayo, sematavi, anotenderera nemhepo. Mimvuri akasiyana-siyana emabwe akasiyana, kubva paanenge achena kusvika kune rakanyanya pink, anomiririra mumvuri wemaruva. Iyo sumbu yemaruva anotumbuka anomiririrwa nema cutstones akasiyana. Yakagadzirwa negoridhe 18k, madhaimondi epinki, morganites, sappires yepink uye pink tourmalines. Yakapukutwa uye yakanyorwa. Yakanyanya mwenje uye ine kukwana kwakakwana. Uku ndiko kuuya kwechirimo muchimiro chemabwe anokosha.
Mhete Zvikwama Ruoko Womenswear Muunganidzi Nguva Womenswear Muunganidzi Rin'i